ऋचाले छाडिन् ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को होला नयाँ निर्णायक ? – Sandesh Press
अभिनेत्री ऋचा शर्मा कमेडी च्याम्पियन २ बाट बाहिरिने भएकी छिन् । आमा बन्ने दिन नजिकिँदै गरेकोले उनी च्याम्पियनबाट आउट भएकी हुन् ।लोकप्रिय कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन २’मा ४ जना निर्णायक रहेका थिए । सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, ऋचा शर्मा र प्रदिप भट्टराई पहिलो सिजनबाट नै यो शोको निर्णायकको रुपमा छन् । ‘कमेडी च्याम्पियन २’ अन्तिम ५ मा पुगिसकेको छ । शो अन्तिम ५ मा पुग्दै निर्णायक ऋचा शर्माले भने यो शो छाड्ने भएकी हुन्
Prevतेल लगाउँदा यी गल्ती त गर्नु भएको छैन ? नत्र देखिनसक्छ कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या
Nextयुमेडिकाले उत्पादन गरेको युझोलिन औषधिमा गम्भीर लापरवाही, बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन